Satellite uye piritsi - sechipo - "Potato System" magazini
Satellite uye piritsi sechipo
в nhau, Nhau dzekambani, Maitiro / mafambiro
Mugadziri weRussia wemakemikari anodzivirira zvirimwa - Firm "Nyamavhuvhu" JSC - gore rakapfuura akatanga chirongwa chekutsigira tekinoroji kune vavanoshanda navo zvichibva pachirongwa cheSkyScout. Kana vachishanda pamwe nekambani kugadzirira, varimi vekurima vane mukana wekusununguka kuwana kune dhijitari chikuva ichivabvumidza kuitisa satellite kutarisisa kweminda, kuteedzera masimba ekukudziridza kwezvirimwa, kuziva nguva inonetsa nzvimbo, kugamuchira fungidziro yemamiriro ekunze kune yega ndima, kuverenga akakwana mashejuru ezve agrotechnical matanho, ongorora kugadzirwa kwevhu kunoenderana nedhata kwemakore akati wandei, pamwe nekuunganidza uye kupfupisa ruzivo rwese kubva kuminda mukati meimwe sisitimu. Zvichienderana neruzivo urwu, mamaneja-matekinoroji e "Nyamavhuvhu" vanoumba panguva yakakodzera uye yakajeka kurudziro pamusoro pekudzivirirwa kwezvirimwa kune yega purazi. 127 mabhizinesi ezvekurima-vanobatirana na "Nyamavhuvhu" vatove kutora chikamu muchirongwa, uye iyo yakazara digitized nzvimbo nhasi ingangoita mamirioni 1,14 mahekita.
Iyo SkyScout system kusimudzira kwekambani yeRussia IntTerra mumunda wekurima kwakaringana: kana yakabatana nayo, vezvematongerwo enyika vanowana mukana kuminda yakavezwa. Iyo sisitimu inoongorora mamiriro ezvirimwa munzvimbo idzi vachishandisa satellite data uye seti yemahara akaverengerwa pahwaro hwavo. Nekudaro, imwe yeanonyanya kuzivikanwa ndeye NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) index yezvinomera, iyo inoratidza huwandu hwehukuru hwegirini mumunda. Iyo inoverengerwa kubva kune satellite satellite yekugadzirisa dhata inoratidza kuti zvakanyanya sei zvirimwa zvinoratidza uye kupinza mwenje. Kugona uku kunoenderana nebasa rephotosynthesis yavo, kuitira kuti kuburikidza nezviridzwa zveNVIVI zvinoita kuti unzwisise kuti zvirimwa zviri kukura sei.
Iyo indices ye heterogeneity uye kutsauka NDVI, zvakare, inoratidza kuti zvakasiyana sei mamiriro ezvirimwa ari mukati memunda mumwe chete. Ndikwo kutsauka kwakakosha kweiyo NDVI inoratidza kuti zviitiko zvakashata zvinogona kunge zvakaitika mumunda: kukuvadzwa nezvirwere kana tupukanana, kudyara zvisina kuenzana, kurapwa kwakasarudzika uye zvimwe zvikanganiso zvehunyanzvi, kukuvara kwezvirimwa zvine hukama nemamiriro ekunze uye ivhu zvinhu, nezvimwe. . Izvi zvinokubatsira kushandisa GPS kukutungamira pamunda, shanyira nzvimbo dzinomutsa mibvunzo, uye nekunongedza matambudziko ipapo ipapo. Izvi zvinonyanya kukosha kumapurazi makuru ezvirimwa ane nzvimbo yemakumi ezviuru emahekita.
Vashandi veIntTra neAugusta technologists vanobatsira varimi kugona chirongwa ichi, pamwe chete navo vanoenda kuminda kunogadzirisa mamiriro akaoma uye kugadzirisa matambudziko nenguva. Kana zvichidikanwa, matekinoroji aAugust anoongorora ega, achigadzirira iwo mafoto anodiwa, mishumo uye kurudziro, uye ovaunza kune vanoona nezvevashandi vezvekurima uye vatungamiriri vemafemu ezvekurima kuburikidza neSkyScout. Nekuda kweizvo zvakajairwa basa uye kuunganidzwa kwedata, "nhoroondo yemagetsi" yeminda inoumbwa, iyo inobvumidza kuita kwakakodzera manejimendi sarudzo mune ramangwana.
Iyo sisitimu inopihwa nemhando dzakasiyana dzezvinongedzo: ruzivo nezvezvirimwa pachazvo, mhando, mbeu dzekudyara, dhata pamusoro pemasora, zvipembenene tupukanana nezvirwere, zvinyorwa zvefetiraiza uye mishonga yezvipembenene inobvumidzwa kushandiswa. Iko mukana wekuwana kubvunzana wega uchishandisa chikuva kwave kuitwa. Sekureva kwaGismeteo, sisitimu inogadzirira mafungire emamiriro ekunze kwewawawa kwemazuva mapurazi, uye pikicha yega yega inogona kuwanikwa kumakiromita mashanu emakiromita. Zvichibva pamhedzisiro yeiyi fungidziro, chirongwa icho pachacho chinoverenga zvakakwana kugadzirisa hurongwa. Muna 2021, Nyamavhuvhu uye vashandi vekambani vakawana mukana weimwe module yakakosha inonzi Fertility Zones: inoratidza mufananidzo wekugadzirwa kwemunda zvichibva pane data reSatellite rakaunganidzwa kubvira 2013. Ruzivo nezve uko zvinogara zviine zvibereko uye zvisina-zvibereko nzvimbo zviripo zvinokutendera iwe kuti ugadzire kusiyanisa mepesa yekushandisa mepu chaimo muchirongwa.
Parizvino, mapurazi 127 atopinda muchirongwa ichi achibatsirwa naNyamavhuvhu, uye nzvimbo izere yenhamba yakapihwa manhamba ndeye 1,14 miriyoni mahekita. Zvakare, kugona kwechirongwa kunoshandiswa kuongorora nzvimbo uko masayendisiti uye agronomists vakaisa zvimwe zviedzo (anopfuura 2 zviuru mahekita panguva ino).
"Nhasi, kuvimbika kwevatengi kunovimbiswa kwete chete nekushanda kwemishonga uye nenguva yekuendesa kwavo, asiwo nemhando yekutsigirwa kwetekinoroji mukushandisa kwavo," anodaro Yulia Babak, murongi weprojekiti. - Kushanda nemapuratifomu edhijitari kunotibatsira kusvika padanho idzva rebasa iri. Nekuda kwekubatana kwakadai, varimi vanowana mukana kuchishandiso chekutarisa, analytics uye kufungidzira, uye isu tine chivimbo chekuti zvigadzirwa zvekuchengetedzwa kwezvirimwa zveAugusta zvichashandiswa nemazvo, nenzira kwayo uye pazvinodiwa. Isu takasarudza chikuva chedhijitari chebasa mune ino nzira, tichitarisa kuverenga nekunyora kwenzira yekugadzirisa nekududzira mifananidzo yemasaiti, kuwanda kwavo, pamwe nekuda kutevedzera zvatinoda zvekuvandudza maturusi epurogiramu. Uye chinangwa chedu nhasi ndechekuti nzvimbo dzese "dzakabatana" muchirongwa dziunganidze dhata pamusoro pehuwandu hwekushanda, uye hunhu hwekudyidzana kwedu nevarimi kuri kuramba kuchivandudza, kusanganisira nekutenda mushandirapamwe wakabatana. "
Tags: "Nyamavhuvhu"mapuratifomu edhijitari
Matambudziko eAgrarian eAzerbaijan: kukohwa kwakapfuma uye kusingakoshi